एक मानिस [+] हावी गर्न सान्टा Muerte को प्रार्थना?
एक मानिस प्रभुत्व गर्न पवित्र मृत्युको प्रार्थना धेरैलाई प्रार्थनाको रूपमा लिइन्छ जुन क्याथोलिक वा इसाई धर्मसँग खासै फरक छैन किनकि यो त्यस्तो विश्वास हो जुन मेक्सिकोमा आदिवासी जनसंख्याबाट आएको हो।
जहाँसम्म, र यो एक भूतप्रेत छविको रूपमा देखिन्छ, सत्य यो हो कि यस संतले धेरै व्यक्तिलाई मद्दत गरेको छ र भावनाहरूमा संलग्न भएको खण्डमा यसको एक विशेष शक्ति छ।
1 सान्ता मुर्तेको प्रार्थना एक मानिस हावी हुन सान्ता मुर्ते को हो?
2 एक मानिस प्रभुत्व गर्न पवित्र मृत्युको प्रार्थना
2.1 यो प्रार्थना केको लागि हो?
2.2 सान्ता मुर्तेलाई हावी हुनको लागि मैले कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
सान्ता मुर्तेको प्रार्थना एक मानिस हावी हुन सान्ता मुर्ते को हो?
सान्ता मुर्ते एक लोकप्रिय विश्वास व्यक्तित्वको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जुन धेरै ल्याटिन अमेरिकी शहरहरूमा पूजा गरिन्छ, प्रायः मेक्सिकोमा जहाँ यो साझा धार्मिक गुटको रूपमा मनाइन्छ।
एक कंकाल चित्रको साथ प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् जुन कुनै र colorमा लुगा लगाउन सकिन्छ तर एउटाले यसलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन सबैभन्दा अधिक कालो हो।
उनका अनुयायीहरू प्रायः अस्वीकृत भएको महसुस गर्दछन् किनकि उनीहरूले त्यस्तो सन्तको पूजा गर्छन् जुन क्याथोलिक चर्चले मान्यता दिएका छैनन् तर धेरैको हृदय र विश्वास कुनै पनि संत जस्तै हो।
तिनीहरू होईन भन्छन् डर तर आदर प्रेरणा र विश्वास र यो वास्तवमा पछिल्लो कुरा हो जसले विश्वास बढाउँदै उनीहरूलाई सामेल गर्दछ।
जल्दैछ मह, जलाउने जोश। म तपाईंको लागि महसुस गर्छु ____________,
र तपाईं मेरो लागि आफ्नो विचार र आफ्नो भावनाहरू महसुस गर्नुहुन्छ ...
म तपाइँको दिमागलाई पूर्ण रूपमा हावी गर्दछु र तपाइँको कार्यहरू धन्यजनक मृत्युको प्रभावबाट अधीनमा छन्।
म तपाईंलाई बोलाउँदछु ____________________ मलाई तपाईं चाहिन्छ __________________ आऊ मलाई खोज्नुहोस् __________________ र मेरो अगाडि झुक्नुभयो तपाईं हुनुहुनेछ। ____________ मलाई तपाईको सबै प्रेम देखाउनुहोस्।
_____________ मेरो खुट्टामा आउँनुहोस्। मैले तपाईंबाट मागेका सबै चीजहरू भर्नुहोस्। रातको महिला, ब्रह्माण्डको प्रख्यात महिला, र उनको पार्थिव उर्जा ...
प्रभाव र दिमागमा प्रभुत्व जमाउँछ, कार्य र हृदय __________________ प्रबल महिला, तपाईं मेरो धन्यको मृत्यु मलाई मेरो सामु राखेर एक _______________ ल्याउनुहोस्।
उसको पाइलाहरू ममा आऊन्, उनका मुटुले मलाई प्रेम गरोस्, उसको शरीरले मलाई मात्र चाहिन्छ कि उसको जुनसुकै उत्कट चाहना हो कि म उसलाई दिन्छु।
मेरो धन्यको हो, एक मिनटको आनन्द र आश्वासन नदिनुहोस् _____________ यदि तपाईं मसँग हुनुहुन्न भने कुनै पनि महिलालाई तपाईंको नजिक जान नदिनुहोस् र यदि उनीहरू तपाईंसँग सम्पर्क गर्छन् भने उनीहरू निश्चित रूपले तपाईंलाई तपाईंको जीवनबाट पूर्ण आक्रमणका साथ टाढा लैजान्छन्।
यदि यो मेरो लागि होईन भने, यो कसैको लागि हुनेछैन, ब्लेभिड डेथ, माईटी लेडी, म तपाईंलाई सम्पूर्ण भक्तिसहित सोध्छु। मर्टल सैप उसको रगतमा बग्दछ म तपाईंलाई बोलाउदछु ____________________ मकहाँ आऊ। तपाईको मुटु, तपाईको बिचार र तपाईको शरीर यस क्षणदेखि नै हुन् र मेरा हुन्, सदाका लागि।
धन्यको मृत्युको नाममा म तपाईंलाई सोध्छु। प्रख्यात महिलाले मलाई _________________ ल्याए।
र मेरो बोटहरूमा आत्मसमर्पण गरियो पालन र मलाई सबै प्रेम देखाउन तपाइँ मेरो बारेमा के महसुस गर्नुहुन्छ?। सान्तासिमा मुर्ते, तपाईं जो ब्रह्माण्डको घने र सबै भन्दा कठिन ऊर्जाहरू सार्नुहुन्छ, ____________ झुकाउनुहोस्। यदि यो अध्यारो ठाउँहरू मध्ये एक हो भने पनि सधैं मेरो अगाडि _______________ राख्नुहोस् र उनको मार्ग मेरो छेउमा पार गर्न दिनुहोस्।
सान्तासिमा मूर्टे तपाई एक हजार हुन सक्नुहुन्छ जो एक लाख हुन सक्नुहुन्छ, मलाई ____________ मा लैजानुहुन्छ र मसँग मायामा म तपाईंको घोडाले मेरो अघि ल्याउने भनेर अनुरोध गर्दछु कि तपाईंको भालाले मेरो छेउमा फ्याँकिदिन्छे शक्तिशाली महिलाले पक्का गर्नुहोस् कि यो मेरो गन्ध छ भने पनि छैन। , कि मलाई सम्झना दिलाउँछ, कि म उपस्थित महसुस ...
जो कोही उनीसँग छ र ऊ जहाँ छँदै छ, रातको लेडी, दिनको लेडी, म सोध्छु कि ____________ को भावना मसँग सँधै रहोस् ...
कि उसले केवल मलाई प्रेम गर्दछ, कि मात्र उसले मेरो धन्यको मृत्युको लागि आँखा राख्छ _____________________
मेरो मुटु र मेरो शरीरको लागि शरीर, दिमाग र आत्मा _______________ मसँग आउँदछ र रातमा तपाईं मसँग हुनुहुन्थ्यो कृपया, म तपाईंलाई सन्तसिमा मुर्ते सन्तसिमा मुर्तेको नाममा सोध्छु बल, मुटु…
र कुल डोमेन __________________ सान्तासिमा मुर्ते म तपाईलाई मेरो संरक्षक बन्न बिन्ती गर्दछु र तपाईले मागेको सबै पक्षहरु तपाईले पूरा गर्नु भएको छ म तपाईंलाई सान्तासिमा मुर्ते भन्दछु मलाई नत्याग्नुहोस् ...
धन्यको मृत्युले मलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् धन्य मृत्युले मलाई ______________ मा ल्याउँछ!
यो सान्ता मुर्ते पखेटा एक गाह्रो मानिस हावी गर्न यो ठुलो तर कडा हो.
यो कुनै स्वार्थी प्रार्थना होइन, यो एक प्रार्थना हो एक व्यक्ति को शक्ति को लागी सोध्नु को लागी उसको मन परिवर्तन हुन्छ के हेर्न को लागी।
यो अरूलाई अपमानजनक बनाउन वा अरूलाई हाम्रो इच्छा गर्ने बनाउनको बारेमा होइन, तिनीहरूलाई उनीहरूको विकल्पहरू हेर्न मद्दत गर्नु हो जुन हाम्रोलागि उत्तम हो।
यो प्रार्थना केको लागि हो?
यो र सबै प्रार्थना तिनीहरू वास्तवमै शक्तिशाली हुन्छन्, तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई अब के गर्ने भनेर थाहा छैन।
यो विशिष्ट प्रार्थना को मामला मा, के खोजिएको छ एक प्रार्थना को माध्यम बाट अर्को व्यक्ति हावी गर्न सक्षम हुनु हो र यो संभव छ यदि तपाईं विश्वास छ।
सान्ता मुर्तेलाई हावी हुनको लागि मैले कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
यो क्षण तपाईले चाहानु भएको यो।
धेरै व्यक्तिहरूले सुझाव दिएका छन् कि एक्लो हुनु र वातावरण तयार गर्नु राम्रो हुन्छ ताकि नराम्रो उर्जाले प्रार्थनाको दिशालाई प्रभाव नपार्न सक्छ तर यो अनिवार्य छैन।
एक अपरिहार्य आवश्यकताको रूपमा अनुरोध गरिएको एकजुटमा धेरै विश्वास हुनुपर्दछ किनकि यदि हामी जे माग्दछौं त्यो चमत्कारी ढंगले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गर्दैनौं भने हामी प्रार्थना उठाउन सक्दैनौं।
एक पुरुष हावी गर्न पवित्र मृत्यु प्रार्थना संग प्रेम मा खुशी पाउन।
कामको लागि पवित्र मृत्यु प्रार्थना